Anyị na-elekwasị anya na ahịa email n'oge na-adịbeghị anya n'ihi na anyị na-ahụ ọtụtụ nsogbu na ụlọ ọrụ a. Ọ bụrụ na ndị isi na-aga n'ihu na-atụ gị ụjọ na listi email gị, ị ga-atụrịrị ha aka n'isiokwu a. Nke bụ eziokwu bụ, na ibu na okenye gị email ndepụta, ihe mmebi ọ pụrụ ịbụ na-enwe na email gị ahịa irè. Kama nke ahụ, i kwesịrị ilekwasị anya ole ndị debanyere aha gị nwere na ndepụta gị - ndị na ịpị ma ọ bụ n'ịtụgharị.
Ntughari - ISPs gbochie ma ọ bụ tinye email gị na junk nchekwa dabere na ogbenye IP izipu aha. Ọ bụrụ na ị na-eziga adreesị email mgbe niile, ọ ga-emetụta aha gị.
-eri - Ọ bụrụ na ọkara nke email gị niile ga-aga adreesị email nwụrụ anwụ, ị na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ ihe ị kwesịrị iso onye na-ere email gị. Sacha ndepụta gị ga-ebelata ego ESP gị.
mmekọrịta - Site n’inwe ndepụta dị ọcha, ịmara na gị na ndị debanyere aha na-elekọta nke ga - eme ka ị nwee ike ilekwasị anya n’ozi gị.